4 Zvikonzero Nei Iwe Mukomana Akaipa Mumubhedha (+ 7 Matipi Ekurara Bonde) - Ukama
4 Zvikonzero Nei Iwe Mukomana Akaipa Mumubhedha (+ 7 Matipi Ekurara Bonde)
Kana iwe wakamira pane ino peji, mukomana wako pamwe haazi ese akakura pamubhedha.
Zvino, anogona kunge asiri anotyisa. Nekuti dai anga ari, zvinogona kunge zviri pasi pekushayikwa kwemakemikari pakati pako, uye waisazoda iye ari pamubhedha wako zvachose. Iwe unotora iyo ick.
Saka pane chokwadi vamwe kemesitiri pakati pako - zvese zvimwe muhukama hwako zvinoita kunge zviri kufamba zvakanaka, uye iwe unoziva pane mukana ipapo.
Asi haasi kuzunza nyika yako pakati pemashiti. Uye iwe uri kushamisika kana paine chero chaungaite nezvazvo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti pane chokwadi chiripo.
Zvepabonde hachisi chinhu chakagadziriswa. Izvo zvakasiyana pese paunozviita iwe. Zvatinoda nezvatisingadi zvinoshanduka uye zvinochinja-chinja, zuva nezuva uye kubva pagore kusvika pagore.
Kunyanya kurara iwe uine mumwe munhu, zvirinani kuti iwe uzive zvavanofarira uye izvo zvisingavaitire ivo.
Kunyanya kuve wakasununguka muhukama hwako uye nekunzwisisa iwe zvirinani zvinoitika mundangariro dzavo, zvakanyanya kubatanidza iwe padanho repabonde.
Asi iwe haufanire kungogara pasi wotarisira kuti mamiriro acho anozozvigadzirisa munguva. Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita kubatsira mukomana wako kuve mudiwa ari nani kwauri uye uve nechokwadi chekuti mese muri kuzadzikiswa nehupenyu hwepabonde.
4 Zvikonzero Nei Mukomana Wako Akashata Mubhedha
Chekutanga pane zvese, ngatitarisei zvikonzero zvishoma nei mukomana wako angave parizvino asiri mudiwa akanaka.
1. Haana ruzivo.
Chikonzero chikuru angave asiri akakura pamubhedha ndechekuti haana ruzivo rwepabonde zvakajairika.
Mushure mezvose, hapana mumwe wedu anoziva zvatiri kuita patinotanga kuita bonde. Izvo zvese nezve kuyedza uye kukanganisa.
Izvo zvinogona kuve zvakadaro kunyangwe zvikaita sekunge anga aine vakawanda vakasiyana pabonde vakaroorana. Nekuti anogona kunge asina kunge aine bonde chairo kana asina kumbobvira ave nehukama hwakareba zvinoreva kuti aiita bonde nemunhu mumwe chete nguva dzose.
Kudzidzira kunoitisa zvakakwana kana zvasvika pabonde.
Hurefu-hukama hukama hunosanganisira kusangana pabonde nemunhu mumwe chete watinonzwa kugadzikana naye kunogona kutidzidzisa zvakawanda nezve kuremekedza zvinodiwa nemumwe munhu uye zvinodiwa uye kutibatsira kuisa munwe wedu pane izvo chaizvo zvinotitenderedza.
Nekudaro, kushomeka kwechiitiko kunogona kureva kuti haatombove nechokwadi chekuti anofarirei, ndoda kuziva izvo zvaunoda.
2. Haasi kujairana nezvaunoda.
Vamwe varume vanonetseka kuti vanzwisise kuti mukadzi wese akasiyana. Kunyanya kana vangori nevakaroorana vashoma, kana mumwe chete wavanofambidzana naye wavakaita nehurefu-hukama. Ivo vanogona kungofungidzira kuti muviri wako unoshanda nenzira imwecheteyo.
Apa ndipo apo iye ave nehukama hwakareba-nguva inogona kuve yakaipa. Pamwe ex wake akanyatsoda chimwe chinhu chisingango chiitire iwe.
Icho hachisi chinhu chaunofanirwa kubatirira paari, hazvo. Kunyanya kutanga, sezvo iye pamwe ari kuyedza chaizvo kuti akufadze. Iye haasi kungo pusha mabhatani ako.
Haasati aziva kuti anofanirwa kuchinjira kuzvinhu zvaunofarira nekuti bonde harisi-rinoenderana.
3. Haana basa kana achikufadza kana kwete.
Zvakanaka, saka chikonzero ichi chakati wandei chine chekuita nezvehukama hwako.
Nyaya yacho inogona kunge iri yekuti haane hanya nekunakidzwa kwako. Kana kuti iye anoisa pamberi pake mafaro ake kupfuura ako.
Zvino, hazvireve kuti ndiye dhiabhori chaiye. Zvinosuruvarisa, munharaunda yekumadokero, kunakidzwa kwemurume panguva yebonde kuchiri kungoonekwa sechinhu chakakosha, uye chevakadzi sebhonasi yekusarudzika.
Nekudaro, iye chigadzirwa chechigadzirwa chake, hongu. Asi izvi hazvireve kuti harisi basa rake kuziva izvo uye kuzvishandira.
Ibasa rake kukupa iwe, waunofambidzana naye, kukuremekedza iwe kwaunofanirwa, kutora kunakidzwa kwako zvakanyanyisa sezvaunotora kwake.
Mat yakasimba uye bray wyatt
4. Haangori kwenguva yakareba zvakakwana.
Pamwe chinetso chako chikuru haisi iyo nzira yaanoita nayo rudo ndeyekuti haagare kwenguva yakakwana kuti iwe ugone kunyatso kunakidzwa nayo.
Pamwe zvinokutorera iwe nguva yakareba kuti uite orgasm uye haakwanise kugara kwenguva yakakwana kuti akusvitse ipapo.
Izvi zvinogona kuve nekuti urikungoita bonde izvozvi uye futi. Kana zvinogona kunge zviri nekuti tarisiro yake iri pakufara kwake uye kwete pakuve nechokwadi chekuti uri kunakidzwa futi.
Matipi manomwe Ekubatsira Iwe Kuita Bonde Zvirinani Nemukomana Wako
Ndinovimba wakwanisa kuisa munwe wako pane dambudziko. Iye zvino inguva yekufunga nezve izvo iwe zvaunogona kuita kushandura zvinhu kuti imi mose munakidzwe nebonde.
1. Isa nyadzi dzako kudivi.
Chinhu chekutanga chaunoda kuti uite kukunda kunyara kupi kwaungave uine bonde rakakomberedza uye zvishuwo zvako zvepabonde.
Pamwe kutaura nezve bonde kunouya zvakasununguka kwauri, uye izvo zvakanaka. Zvinozoita kuti zvive nyore kwazvo kuva nehurukuro dzakashama pamusoro pezvaunoda kubva kune mumwe wako.
Asi kana kukurukura zvaunoda uye zvaunoda nemumwe wako wepabonde zvichikuita kuti unetseke, unofanirwa kuita nhamburiko yekuisa kuzviisa kudivi.
Kana iwe usingakwanise kukunda kunyadziswa kwako uye nekutaurirana nemukomana wako nezve bonde pachena uye nekuvimbika saka zvinhu pakati pako hazvisi kuzombovandudza bonde.
Iko kukanganisa kukuru kunoitwa nevazhinji vakadzi kunyepera kunakidzwa kwepabonde nemumwe wako kunyangwe ivo vasiri kunyatso kuinzwa.
Zvino, iwe unogona kuyedzwa kuinyepera kana iwe uine mumwe munhu uye iwe uchiziva kuti chichava chinhu chenguva-chimwe chete.
Asi kana iwe uchifunga kuti hukama hunogona kushanduka pakati pako kana iwe uri kurara nemukomana, ipapo kufadza kunakidzwa ndiyo nzira yakanakisa yekuzvipfura netsoka.
Nekuti kana ukanyepera, ipapo iye zvine musoro kufunga kuti iwe waifarira chero zvaaiita. Saka saka anenge ave kutozoyedza zvakare, uye zvakare .
Uye izvo zvinokusiya iwe uri munzvimbo ine hunyengeri, sekufanirwa kutsanangurira mukomana wako kuti wanga uchingori uchiita zvekunakidzwa pabonde nguva yese ino ichave iri mamiriro asina kugadzikana.
Saka, ita shuwa kuti uri kutendeseka uye uchingoratidza zviratidzo zvekunakidzwa zvauri kunyatsonzwa, nekuda kwako zvese.
3. Funga nezve dzimwe nyaya dzehukama.
Zvepabonde zvakaoma. Ndine chokwadi chekuti haudi kuti ndikuudze izvozvo.
Yakapindirana nemanzwiro edu nenzira yechienzi, isingatsanangurike uye isingadzivisike.
Kana paine matambudziko muhupenyu hwako hwepabonde, zvinogona kunge zvisiri hunyanzvi hwemukomana wako semudiwa ndiro dambudziko.
Funga nezve kana dzimwe nyaya muhukama hwako, sekushomeka kwekuvimba kana kutya kuzvipira kana kuve panjodzi kune mumwe nemumwe kungave kuri kuuya pakati pako mumba yekurara.
Kugadzirisa izvo zvinokonzeresa zvinozobatsira zvinodzivirira nerutivi rwepabonde, zvinozoreva kuwedzera kunakidzwa kwaro kwese kwese.
4. Muudze, umuratidze.
Zvakanaka, rangarira maitiro atakabvumirana kusiya kunyara pamusuwo wemba yekurara?
Kana iwe uchida kuti mukomana wako ave mudiwa ari nani, saka iwe uchafanirwa kumuudza uye kumuratidza chaizvo izvo zvinorevei.
Muudze zvaunoda. Tungamira maoko ake. Zvibate iwe kuitira kuti anyatsoona zvinoshanda kwauri.
Itai seksikäs! Kana iwe uri mune irwo rudzi rwechinhu (uye imi mose muchibvumirana, hongu), bvumiranai kuti iwe uri mutariri uye muudze zvakadzama chaizvo izvo iwe zvaungade kuti aite.
Usatarisira kuti achizoziva zvemashiripiti zvaunoda nekuteresa. Hazvishande zvakadaro. Kufanana nezvinhu zvakawanda, isu tinowana zvirinani pane chimwe chinhu kana isu tiine yakajeka mirayiridzo yekuzviita!
5. Zivai miviri yeumwe neumwe.
Chikamu chakakura chechinetso chako chinogona kunge chiri chekuti iwe hausati wasvika pakuziva miviri yemumwe zvakanaka zvakakwana izvozvi. Inguva yekuongorora.
Nzira huru yekuita izvi kuve nehusiku husiku mukati. Vhenekesa mamwe makenduru uye ubudise maoiri ekuzora.
Tora ichozve mukukwiza kwadzo uye kufukidza yega yega yega miviri yemumwe muviri.
Tsvaga nzvimbo dzinonakidza paanopenga kana iko kutsvoda kusimba kumushandura uye kumuita kuti aratidze muviri wako nenzira imwecheteyo.
Ichakubatsira iwe mese kuona chaizvo mabhatani aunoda kusundidzira kubatidza imwe yacho.
6. Ita shuwa kuti inzira mbiri-nzira.
Kana iwe uchida iye kuti ave anoteerera anoda anoda kukuchaira iwe musango nekunakidzwa, iwe unofanirwa kuve iye kwaari futi.
Tora zvinyorwa zvepfungwa zvezvinhu zvaanoda kana izvo zvinomufambisa musango uye uve nechokwadi chekumuitira iye (chero bedzi vasingaiti kuti unzwe kusagadzikana, hongu).
Bonde rakakura chete kana richifadza kwazvo kune vese vanhu vane chekuita, saka nekuita kwako zvishoma kuti umupe kunakidzwa kwaanoda, anenge achizonyanya kuisa simba rekuwedzera kukupa iwe chaunofarira.
Usafunge kuti nekuda kwekuti anopedzisira, ave neruzivo runonakidza. Ita kuti ive chiitiko chinonakidza!
7. Ita zvepabonde zvakawanda!
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, nzira yakanakisa yekuita zvirinani pane chimwe chinhu kuzviita zvakanyanya. Unofanira kudzidzira!
Zviri nyore kuti hupenyu upinde munzira uye pabonde uye nemanzwiro ehunhu nguva nemumwe wako kuti mubude nepahwindo, kunyanya kana mave pamwe kwenguva yakati rebei kana kuti matamira pamwe chete.
Asi ukatadza kuzviita, mukana mushoma uripo wekuti muchakura pamwe chete pabonde uye wotanga kuita bonde rinogutsa rinozosimbisa chisungo chako chemweya chakasimba.
Bonde rinofanira kunakidza uye inzira yakanaka yekukuunza padyo nemumwe wako, saka zviise pekutanga. Kana iwe uchifanira kuronga iyo nekuda kwebasa kana zvimwe zvisungo, zviite. Kurara kwakarongwa hakufanirwe kureva bonde rinofinha, risingazadzise.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezvekushayikwa kwemubhedha wemukomana wako? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
10 Makuru Misiyano Pakati Pekuita Rudo Uye Kuita Bonde
9 Matipi Kune Vakaroorana Vane Dhiraivhu DzeBonde Izvo Zvisina Kufanana
'Hatichaiti Zvepabonde Zvakare' - Zvikonzero gumi Nei Uye Zano Kune Mumwe nemumwe
15 Hapana Bullsh * t Nzira dzekunzwa Sexy Zvakare
darren drozdov vs d'lo shava
manzwiro akasimba emumwe munhu wauchangosangana naye
Muvhuro husiku yakasviba purogiramu 2017
mukomana wangu anoisa mhuri yake pamberi pangu
sei kusavava uye kutsamwa